Kule mpelasonto, i-VPN Cyberghost iphula intengo yokunikezwa kwayo kwaminyaka yonke - i-Thuka RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM Kule mpelasonto, i-VPN Cyberghost yephula intengo yeminikelo yayo yonyaka
Kule mpelasonto, i-VPN Cyberghost yephula intengo yeminikelo yayo yonyaka
Romain Ribout -
Izolo ku-13: 04
[Iphephandaba Langesonto] Unomusa, uCyberghost? Ngokubhaliswa kwayo konyaka owodwa kwe-VPN, inkampani inikeza i-6 izinyanga zamahhala. Izindleko zanyanga zonke ngama-2,75 euros ngenyanga, ama-49,50 ama-euro wezinyanga ze-18, isilinganiso esivame ukugcinelwa labo ababhalisela iminyaka ye-3.
Zonke izinsuku, iqembu labahleli likukhethela uhlelo oluhle olutholakala kuwebhu, olunobudlelwano obuqondile nentambo yethu yokuhlela. Isonto kunalokho ezibonakalayo; ngempelasonto kunalokho software nezinsizakalo.
Uma sincoma uCyberghost njengesixazululo se-VPN, akusizi ngalutho. Ngaphandle kokuba ngomunye wabadlali abaphambili kulo mkhakha, inkampani inikeza insizakalo esezingeni eliphezulu esivele sayivivinya futhi sayivuma ngaphambi kokubhala le migqa. Ubuye abe sezingeni lokungena izixazululo zethu eziphezulu ze-3 VPN okwamanje.
Namuhla, siyabuya sizokhuluma ngaye ngokunyusa okuzokuvumela ukuthi uyihlole ngaphandle kokuzibophezela isikhathi eside. Ngokungeziwe ekunikezeni okubhaliselwe konyaka owodwa kuma-2,75 euros ngenyangaintengo yanyanga zonke yokubhalisa iminyaka ye-3, iCyberghost futhi inikela ngezinyanga zamahhala ze-6. Ngokuqondile, ukhokha izinyanga ze-12 futhi uzokujabulela insizakalo yezinyanga ze-18.
Qaphela ukuthi isikhathi sokulingwa sezinsuku ze-45 sinikezwa ukuthola umbono ngekhwalithi yensiza. Uma ungenelisekile, vele uxhumane nensizakalo yamakhasimende ukuthola imbuyiselo yakho ngokugcwele.
Ukuqonda kangcono okunikezwayo
Singayethemba i-Cyberghost ngokuphepha kwedatha yayo?
ICyberghost ingumdlali obucayi ezimakethe ezinamathuba kakhulu futhi igcwele i-VPN. Le nkampani inamalungu cishe we-5 800 emhlabeni jikelele (amazwe e-90 esewonke) ukuhlinzeka insizakalo esezingeni elifanele kubasebenzisi bayo, ngenkathi iqinisekisa ukuthi abayigcini idatha yabo. Ingenye yama-VPN amathathu aphambili esiwancomayo kusiqondisi sethu ku-VPN enhle kakhulu okwamanje.
Ngokubhalisa, kungenzeka ukufinyelela kukhathalogi yase-US yeNetflix, ngokwesibonelo?
Yebo. Amaseva weCyberghost ahambelana nokusakazwa. INetflix inokubekezelela okuningi kakhulu kulo mkhuba, noma ngabe kungavunyelwe kuwo imihlahlandlela. Lokhu akulona iqiniso kuzo zonke izinsizakalo zokusakaza, ikakhulukazi Disney + lapho bekungenakwenzeka nje ukuxhuma kwi-beta yesiDashi.
Ngingawasebenzisa ngamaphi amadivayisi i-Cyberghost VPN?
ICyberghost VPN iyatholakala kumadivayisi amaningi asebenzisa i-OS yanamuhla. Uhlu oluphelele lungatholakala kuleli kheli futhi sithola i-iOS, i-Android, i-Windows, i-macOS, i-Chrome OS, i-Linux kanye nama-routers athile azokuvumela ukuthi usebenzise inethiwekhi yakho yonke ngemuva kwe-VPN.
Ngingakwazi ukubhalisa okubhaliselwe kwami ​​nezihlobo?
Kungenzeka ngokuphelele. Ukubhaliswa kweCyberghost kukuvumela ukuthi uxhume kumadivayisi ahlukile we-7 nelayisense elilodwa.
Kunzima ukuyisebenzisa nsuku zonke?
ICyberghost ingesinye sabafundi abahle ohlangothini lokusebenzelana. Ikhasimende lihle, lihlelekile futhi lichazwe kahle, ngomzamo omkhulu ngokuhunyushelwa kwisi-French.
I-interface yeCyberghost (nansi iklayenti leWindows) kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Izixhumanisi zalesi sihloko zihlangene: uma uthola ukubonga kwakho sibonga, sithola ikhomishana encane. Sichaza konke lapha.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/567467-ce-week-end-le-vpn-cyberghost-casse-le-prix-de-son-offre-annuelle.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567467
Hlola i-Apple AirPods Pro: isivele ingaphezulu kakhulu kwamahedfoni
Ukuhlolwa kwe-JBL Link Bar: ibha yomsindo yama-TV ayihlakaniphile